Reysal Wasaare Kheyre: Waxaan Aqalka Sare ka codsaneynaa inuu ansixiyo 29 sharci oo ag yaala – Kalfadhi
April 1, 2019 April 1, 2019 Kalfadhi
Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa ugu baaqay Golaha Aqalka Sare in ay meel mariyaan 29 Hindise Sharciyeed, oo uu sheegay in uu u soo gudbiyey Golaha Shacabka. Kheyre Waxaa, isaga oo ka hadlayey Xafladda Furitaanka Kalfadhiga 5-aad ee Aqalka Sare maanta, uu Labada Gole ee Baarlamaanka ugu baaqay in, iyaga oo ay wada shaqeynayaan Golaha Fullinta, ay u midoobaan hormarinta danta guiud.
“Waxaan Aqalka Sare si naxariis leh uga codsaneynaa meel marinta Hindise Sharciyeedyada ag yaala” ayuu yiri Reysal Wasaare Kheyre. “Waxaan Xildhibaannada iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in loo midoobo danta guud” ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu Reysal Wasaaruhu sheegay in ay muhiim tahay in ay Golayaasha Dowladdu wada shaqeeyaan.
Reysal Wasaare Kheyre waxa uu sheegay in ay Xukuumaddiisu ka shaqeyneyso in ay dalka ka dhacdo Doorasho Qof iyo Cod ah, marka uu dhamaado xiliga dowladdiisa. Waxa uu sheegay in, si ay sidaas u dhacdo, ay sameeyeen sharciyadii suuragelin lahaa oo dhan. “Waxaan labada gele u soo gudbin doonaa Hindise Sharciyeedyada Doorashada, oo dhawaan dib-u-eegis lagu soo sameeyey” ayuu yiri Kheyre.
Hadalka Kheyre ee ah in ay Labada Gole ee Baarlamaanka wada shaqeeyaan, lana shaqeeyaan Xukuumadda, si danta guud loogu midoobo, waxa uu imaanaya iyada oo uu wali taagan yahay khilaafka Labada Gole ee Baarlamaanka, taas oo uu dhawr mar ku celceliyey Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaasshi, inuusan wali Madaxweyne Farmajao ku guuleysan xalinta arrinkaas 2-dii bil ee Baarlamaanku ku maqnaa fasaxa.